Mar Mar Aye 280 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Than Soe Hlaing – Intelligence leaks – signs of Burmese Regime break down ?
Law Eh Soe – Remembering U Min Thu →
Mar Mar Aye 280
သောတရှင်တို့ရေ၊ အရင်တပတ်က မာအေး တောင့်တတဲ့ ‘တန်ပြန်ဆု’ တေးကလေး ရေးပေးသွားတဲ့ မောင်ကြေးမုံနဲ့ ဂီတအလုပ်တွေ မာအေး အများကြီး လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ တပုဒ်စ-နှစ်ပုဒ်စကနေ၊ တခွေလုံး ဆိုဖြစ်တဲ့ အထိပေါ့၊ အဲဒီအထဲမှာ ပြဇာတ်လဲ ပါတယ်၊ ဂီတကောင်စီအတွက် ရေးပေးခဲ့တဲ့ တေးသရုပ်ဖေါ်တွေလဲ ပါ ပါတယ်။ ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်က အလှမိဖုရား ခေမာ အကြောင်း၊ ဘုရင်ကြီး ဗိမ္မိသာရနဲ့ သားတော် အဇာတသတ်ကို ဖွဲ့တဲ့ မေတ္တာဇာတ်၊ သဇ္ဇဝီမင်းတို့ရဲ့ ညီညွတ်မှု၊ မာသာနန္ဒီ တေးသီမကလေးရဲ့ မာယာတသိန်း အပလိန်းအနန္တ၊ နယ်ချဲ့ကို သေအထိ သူ့ကျွန်မခံ တော်လှန်ပုန်ကန် စတေးခံသွားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အဖိုး၊ အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘေးတော် ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မင်းရောင် (ခေါ်) မင်းကြီးလရောင် အကြောင်းတွေကိုလဲ ထဲထဲဝင်ဝင် မှတ်တမ်းတင် ရေးခြယ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by oothandar on August 3, 2009 in Mar Mar Aye